जाजरकोटमा भाइरल ज्वरोले मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो, ६ सय बढी बिरामी – Vision Khabar
जाजरकोटमा भाइरल ज्वरोले मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो, ६ सय बढी बिरामी
। २२ पुष २०७४, शनिबार १०:४४ मा प्रकाशित
जाजरकोट । जाजरकोटको जुनिचांदेमा फैलिएको रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा ५ बालबालिका समेत रहेका छन । अहिले ५ जनाको पुष्टि भएको छ । एक जना ९ दिनका बालक रहेका छन । जुनीचाँदे गाउँपालिका २ का ५७ वर्षीय आइती तिरुवा,६५ वर्षीया धनसरा नाथ र ७५ बर्षका सतरुप शाहीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का ६७ वर्षीय करसिंह टमटाको मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य प्रमुख राम नेपालीले जानकारी दिनु भयो ।
एक साता देखि फैलिएको महामारीबाट बालबालिकाहरुमा १ महिनाका ४ जना र ४ वर्षको १ जनाको ज्यान गएको जनस्वास्थ्य प्रमुख राम नेपालीले जानकारी दिनु भयो ।
ज्वरो र रुघाखोकीको महामारीले जुनीचाँदेका ६ सय बढी गाँउलेहरु बिरामी परेका डा. पवन शाक्यले बताउनु भयो ।
स्वाथ्य चौकी बड्कुलेका इन्चार्ज हरिबहादुर सिहंका अनुसार स्वाथ्यचौकीमा दैनिक ५० /६० जना भाइरलका बिरामी आउने गरेको बताउनु भयो ।
प्रभावित क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट दुई दिनको पैदल दुरीमा पर्छ।
मौसम परिवर्तनसँगै गाँउमा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। बिरामी स्वास्थ्य संस्था नआई झारफुक तिरै लागेकाले बिरामीको मृत्यु हुने गरेको जुनिचादे गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर के.सिले जानकारी दिनु भयो ।
गाउँपालिका १ को जुनी, चाँदे, काप्रा, बड्कुले, कार्कीगाँउ, वडा नं २ को मजकोट, आलीमौगाना र वडा नं ३ का डाडाकोट र परालेमा भाइरल ज्वरो र रुघाखोकी प्रकोपको रुपमा देखापरेको अध्यक्ष के.सिले जनाउनु भयो ।
सबैभन्दा बढी वडा नं २ मजकोटमा बिरामी देखापरेका छन्। एउटै घरमा ३/४ जनासम्म बिरामी परेका छन ।
भौगोलिक विकटताका कारण स्वास्थ्य संस्था टाढा रहेको र स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो उपचार नहुँदा समस्य भएको छ ।
बिरामी हुनेमा बढीजसो बालबालिका, बृद्धबृद्धा र महिला रहेका छन्। बिरामीहरुमा घाँटी दुख्ने, सुख्खा खोकी, टाउको दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने,चिटचिट पसिना आउने, ज्वरो आउने लगायतका समस्या देखिने गरेको छ।
भाइरलको प्रकोप फैलिएको सूचना पाएपछि जिल्ला स्वास्थ्यले रोग पहिचानको लागि महामारी स्रोत व्यक्ति ल्याब टेक्निसियन कृष्ण खत्रीको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको जनाएको छ।रोगको पहिचान गर्न टेक्निसियन पठाएका छौं जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले भने ‘एच १ एन १ हो कि भनेर टेष्ट किट पठाएका छौं। यदि एच १ एन १ भए रोग फैलिने खतरा धेरै हुने भएकोले पहिचानका लागि समयमै तदारुकता देखाएका हौं।’
त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा थप उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गर्खाकोटबाट डा. पवन शाक्यको नेतृत्वमा थप टोली पठाएको कार्यालय प्रमुख नेपालीले बताउनु भयो । डाक्टरको टोली शनिबार मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेछ।
त्यस्तै औषधी अभाव हुन नदिन शुक्रबार मात्र एक ट्याक्टर औषधी समेत पठाइएको जनस्वास्थ्य कार्यलयले जनाएको छ ।
भाइरल देखिएको प्रभावित क्षेत्रमा शिविर चलाएर उपचार थाल्न डा. शाक्यलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख नेपालीले जानकारी दिनु भयो ।